Sterilizer Dhexdhexaad (Autoclaves) Warshad | Shiinaha Sterilizers Steam Dhexdhexaad (Autoclaves) Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
MAST-V (Albaabka saraysa ee toosan, 280L-800L)
MAST-V waa nadiifiye dhakhso ah oo is haysta oo iswaafajiya oo wax lagu barto laguna horumariyo iyadoo loo eegayo shuruudaha ugu dambeeya ee xarun caafimaad iyo CSSD. Waxaa loo qaabeeyay oo la soosaaray isku-darka awoodda sare ee kharash-ku-oolnimada, iyada oo la siinayo kalsooni hawlgal sare iyo dayactir fudud.
Naqshadeynta qolladaha waxay la heshiiyeen gobolka GB1502011, GB8599-2008, CE, European EN285 standard, ASME iyo PED.
MCSG Generator Qiijiye Xarago
Qalabkani wuxuu isticmaalaa uumiga warshadaha si uu u kululeeyo biyaha saafiga ah si uu u soo saaro uumiga saafiga ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa caafimaadka, dawooyinka iyo warshadaha cuntada si loo helo uumi tayo sare leh si looga dhigo jeermis dhalis tayo sare leh. Waxay buuxineysaa shuruudaha tayada uumiga waxayna si wax ku ool ah uga hortagi kartaa xirmada jaallaha ah iyo dhibaatada bacda qoyan oo ay sababtay tayada uumiga ee liita.
Nadiifi Q Nadiifi danab dhaliyaha korantada
Nadiifi Q taxanaha dhaliyaha uumiga korontada nadiifka ah wuxuu soo saaraa uumiga nadiifka ah isagoo kululeynaya biyo saafi ah. Waxay leedahay faa iidooyin yar yar, kuleyliyaha degdega ah, wasakh la’aan, hawl fudud iyo isku halaynta sare. Waxay si wax ku ool ah u xallin kartaa wasakhda miridhku ku xirmay qalabka iyo dharka xirmada.
Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa waaxda stomatology iyo indhaha, qolka qalliinka iyo hay'adaha kale ee caafimaadka. Waxay ku habboon tahay dhammaan qalabka adag ee la duubay ama aan la duubin, aaladda daloolka A-fasalka (ilkaha gacmaha iyo gogosha), qalabka la geliyo, dharka labiska iyo tubooyinka caagga ah, iwm.
MAST-H (Albaabka saraysa ee Horizontal, 1000L-2000L)
MAST-H waa mid ka mid ah noocyada cusub ee gobolka ee sterilizer-ka farshaxanka farshaxanka lehna baaxad weyn iyadoo la siinayo albaab toosan oo si toos ah loo riixayo, xakameyn caqli leh, howl lagu kalsoonaan karo iyo dayactir fudud, kaas oo ku habboon macaamiisha heerka sare leh miisaanno waaweyn Waxaa loo horumariyey iyadoo loo eegayo shuruudaha ugu dambeeya ee xarun caafimaad iyo CSSD.
MAST-A waa nadiifiye dhakhso badan oo is haysta oo iswaafajiya kaas oo cilmi baaris lagu sameeyo laguna horumariyo iyadoo loo eegayo shuruudaha ugu dambeeya ee xarun caafimaad iyo CSSD. Waxaa loo qaabeeyay oo la soosaaray isku-darka awoodda sare ee kharash-ku-oolnimada, iyada oo la siinayo kalsooni hawlgal sare iyo dayactir fudud.